कसरी Clematis रोपण गर्ने? केहि उपयोगी सल्लाहहरू
यो कुनै संयोग छैन कि धेरै स्वच्छता धेरै फूलवालाहरु मा रुचि राखछन। यी बिरुवाहरूको सूची ठूलो छ। धेरै मानिसहरू यी दाखिलाहरू जस्तै छन् जुन उनी जून र सेप्टेम्बरसम्म प्रशस्त हुन्छन् । यस्तो किस्महरुमा Elegy, Viola, Blue Angel, Ernst Markham र जिप्सी Quinn शामिल छ। एकै समयमा, धेरै सय फूलसम्म सम्म व्यासमा बीस सेन्टिमिटरसम्म दाखिलामा पसेको हुन सक्छ।
कब र कसरी सफा गर्ने?
शरद ऋतु वा वसन्तमा एक स्थायी स्थानमा प्लांट clematis। शरद ऋतुको अवधिमा, यो तथ्यलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ कि रोशनी ठाउको सुरुवात अघि रूट हुनुपर्छ। वसन्त रोपण गर्दा, तापमान शासनमा ध्यान दिनुहोस्। आखिर, रातको शीतले क्लिमिसिसलाई नकारात्मक असर पार्न सक्छ। रोपणका लागि बिशेषहरू ठूलो बनाउन सकिन्छ, लगभग 60 सेन्टिमिटर गहिरो र धेरै व्यासमा। यो 10-15 सेन्टिमिटर मोटाइको ड्रेनेज को तह बनाउन वांछनीय छ। यो कुचल पत्थर वा भाडा ईटाको लागि प्रयोग गर्नुहोस्। माटो मा रोप्न को लागी रूट राम्रो छ, चट्टानमा खसेको छ। धेरैले बालुवा र पृथ्वीको मिश्रणको समान घाँटी बनाउँछ, र बिरुवाको जरा गर्दन बालुवाको साथ छिटो छ। यस्तो उपाय clematis को क्षय रोक्न सक्षम छ, साथै गर्मीहरु मा मूल प्रणाली को overheating देखि र सर्दियों मा ठंड को रक्षा गर्न सक्षम छ।
कसरी सफा राख्न को लागी सही रोपण योजना, पानी, रोपण गर्ने हेरविचार
बिरुवाहरू बीच इष्टतम दूरी लगभग एक मीटर हो। यो बनाइयो र अधिक - लगभग 120 सेन्टिमिटर। त्यसपछि बिरुवाहरू राम्रो हुनेछ र बढी शाखा हुनेछ। Clematis रोपण पछि प्रचुर मात्रामा पानी यो आवश्यक छ। थप खेती गर्दा, नियमित जमिनमा जमिनलाई निरन्तर हावा पहुँच सुनिश्चित गर्न मिट्टी को ढोका गर्न सिफारिस गरिन्छ। यो माटो को बिरुद्ध रोपण गर्न सक्छ कि सामालाई मर्नु पर्ने उत्कृष्ट तरीका पनि हुनेछ।
कसरी Clematis रोपण गर्ने? फूलहरु का राज
Clematis को सफल खेतीको लागि, धेरै सरल नियमहरू हेर्न सकिन्छ:
- रोपण गर्नुअघि खरिद गरिएको बीजिंग मंगनीनीमा राम्रो विफलता छ;
- रोपण स्थायी रूपमा स्थायी स्थानमा लगाईनु पर्छ;
सिर्जनाकर्ताको लागि एक विश्वसनीय समर्थन स्थापना गर्नुहोस्। त्यस्तो सावधानी उपायले कमजोर जला प्रणालीलाई यांत्रिक क्षतिबाट बचाउनेछ;
- यो दाग बढ्दै जाँदा ती बढ्दो गोलीहरू बाँध्न आवश्यक छ;
- clematis - हल्का मायालु बिरुवाहरु, तथापि, मूल प्रणाली को अधिकृत हुनु हुँदैन;
- पार्श्व शूट को वृद्धि को कारण, रोपण को शीर्ष चुटकी;
- यो सल्लाह दिइन्छ कि ती ठाउँहरूमा हवाइहरू निरन्तर रूपमा उडिरहेको ठाउँहरूमा सफाटिमा रोप्नु हुँदैन किनकी एक बलियो हावा प्लांट गोली मार्न सक्छ;
- सुनिश्चित गर्नुहोस् कि बढ्दो clematis भवनको छतबाट पानी पाउँदैन, यसले नकारात्मक असर पार्दा सृष्टिकर्ताको स्वास्थ्यलाई असर गर्नेछ। त्यसकारण, यो भवनको पर्खालबाट पचास सेन्टिमिटर भन्दा बढी रोपण गर्न राम्रो छ।
यो सबै छ कि कसरि clematis रोपण को बारे मा जान्छ।
प्रशस्त वृद्धि र राम्रो फूल बनाउने सुनिश्चित गर्न, नियमित रूपमा शीर्ष ड्रेसिंग बनाउन कहिल्यै नबिर्सनुहोस्। Clematis वृद्धि चरण को देखने मा उर्वरक बेहतर लागू गर्नुहोस।
अब तपाईलाई थाहा छ: कसरी देशमा फूलहरू रोप्ने , ताकि तिनीहरू आनन्द ल्याउँदछन्, र तपाइँको साइट सधैँ खिलिरहेको थियो।
आलुको क्यान्सर: रोगजन्य, फैलाउने तरिकाहरू, लडाईका तरिकाहरू
बागवानीको रहस्य: कसरी ग्लोडीलीको बल्ब भण्डार गर्ने?
सिनेम - बीउ बढ्दै सबैलाई उपलब्ध छ
बोर्डो मिश्रण: बागवानी र बागवानीमा उत्पादन र प्रयोग
जमोकोकुलका कसरी प्रत्यारोपण गर्ने? प्रजनन, हेरचाह, फोटो
ग्रह मा सबैभन्दा ठूलो मान्छे
Scorpio र मीन उपयुक्त छ?
कसरी दोस्रो बच्चा निर्णय गर्न? हामी पत्ता सबै "फाइदा" र "बुरा"
न्यूयोर्क शहर मा ऊंची भवन के हो?
बल विरोधी तनाव - भित्री शान्ति सरल तरिका
जब तपाईं स्तन दूध पम्पिंग गर्न आवश्यक
उच्च परिभाषा अडियो डाउनलोड
माछा केक कड लागि नुस्खा - नाजुक स्वाद, कुरकुरा
लचिलो छत: प्रकार, उपकरण स्थापना